I-recipe yeentyatyambo "Flower"
Ngeendlela zokukhulula inhlama Kukho iindlela zokukhulula inhlama ngemvubelo (indlela yezinto eziphilayo), i-soda kunye ne-ammonium carbonate (indlela yamachiza) kunye namanzi okanye umoya (indlela yokusebenza). Kwindlela yokuqala, isambuko sinqunywe ngoshukela equlethwe kuvavanyo. Ngenxa yoko, i-carbon dioxide kunye notywala zenziwa. Inkqubo yokutyalelwa ekuhlolweni iqala ukususela ngexesha lokuxolela kwaye iqhubeka ide idityaniswe ngokupheleleyo kwi-oven. Ama-disintegrators ama-khemikhali yilawo maqhinga, athi, xa ahluthwe ngokusebenzisana kweekhemikhali okanye ngaphantsi kwefuthe lokushisa, ukukhulula izinto ezinobungozi (CO2, NH3). Inzuzo yale ndlela yokukhupha intlama phambi kokuba uvavanyo lwezinto ze-biological lukhawuleze ekuphumuleni. Ukuba ukukhululeka kwenhlama elungiselelwe kwimvubelo kuthatha iiyure ezimbalwa, ngoko kwi-chemical disintegrators - ngexesha lokubhaka. Imfuno efunekayo yokuchithwa kweekhemikhali kukuba ukukhutshwa kwezinto ezingekho gesi kungenzeki kuvavanyo, kodwa kwimveliso xa ubhaka. Yingakho kukho imfuneko yokongeza i-powder baking powder ekupheleni kwebhekki kwaye ubhaka okanye i-fry confectionery kubo ngaphandle kokulibala. Ngendlela yokwenza umbane, ukutshabalalisa umoya kunye namanzi. Umoya ujoyiwe ngomzandla (umzekelo, xa uhlawula intlama yebhayisike), kunye namanzi, uguqula kwisitya ngaphantsi kwefuthe lokushisa okuphezulu, uzama ukuphuphuma kwintlama (njengokungathi uyayiphakamisa), ngenxa yokuba imveliso ikhululiwe ukuba yenze iparosity enhle. I-recipe yale brushwood isebenzisa indlela yokucoca.
Ioli ecocekileyo ye-sunflower 400 ml
I-powder powder 100 g
I-Vanillin i-pinch 1
Ubisi 125 ml
Ukhilimu omnandi 1 tbsp. l.
Inyathelo 1 Ukulungiselela imithi, kufuneka uthathe umgubo wengqolowa ebangeni eliphezulu, ubisi, ukhilimu omuncu, kuphela iimboli zeqanda eziluhlaza, ushukela, ushukela ophucukileyo, ioli, i-vanillin kunye netyuwa.
Inyathelo 2 Iimbumba zamaqanda ngokukhawuleza zigalela iswekile.
Inyathelo 3 Kwinqanaba leqanda, uthele ubisi, kongeza ukhilimu omuncu kunye netyuwa.
Inyathelo 4 Hlanganisa umxube kwaye uphuze ngokukhawuleza kude kube lula.
Inyathelo lesi-5 Kwisistim esiphumelayo ukuba uthele ngomgubo.
Inyathelo 6 Hlanganisa intlama.
Inyathelo lesi-7 Intyatye igqityiweyo kunye nokusebenzisa ingilazi kunye neglasi ukwenzela ukucima iindidi zeeramitha ezahlukeneyo.
Isinyathelo 8 Sika ii-billets kwisangqa, ungafikeleleki kwiziko.
Isinyathelo 9 Beka umsebenzi omncinci kumsebenzi omkhulu, ukudibanisa amaziko, kwaye ucinezela phakathi kwimbindi ngomnwe ukwenzela ukuba i-workpieces ifakwe ndawonye. Unako ukugcoba i-yolk ephakathi enkulu.
Inyathelo 10 Iimveliso zifakwe ngokukhawuleza kwixabiso elincinci le-oli ye-vegetable (e-fried-fried), ukujika imbiza ukuze ufumane umbala ofanayo. Ukulungele ukutshisa iinkuni ezibhekiselwe kwiphilisi yephepha ukwenzela ukwahlula amafutha amaninzi.
Inyathelo 11 Xa ukondla kakhulu ufafaze i-brushwood ngomxube weshukela kunye ne-vanillin.
Vula ipau pie
Iinqunqa zengulube kunye neoli yesardadi
Ukunyuselwa kwintsholongwane ye-Anti-viral
Ikhukhi ze-Lemon kunye ne-ricotta
Ulwaphulo lobugcisa: ukucinga okubalulekileyo
Indlela yokwenza i-postcard enhle yoNyaka omtsha ngezandla zakho, iklasi yeklasi kunye nesithombe
Ukuzalwa kwabasetyhini abaneengcambu ezincinci
Ingubo yelanga evulekileyo: isimo sokuqala salo nawuphi na uhlobo
Umtshato kaVadim Kazachenko kunye no-Irina Amanti wachazwa mthethweni
Indlela yokujongana nokukhuluphala komntwana
Inyama encinci kunye nesonka se-pita